Fahafatesana filoha teo aloha :: Niezinezina ny fandevenana ny amiraly Ratsiraka Didier - ewa.mg
News - Fahafatesana filoha teo aloha :: Niezinezina ny fandevenana ny amiraly Ratsiraka Didier
Nodimandry teny amin’ny hopitaly Soavinandriana, tamin’ ny alahady 28 marsa, tamin’ny 6 ora sy sasany maraina, teo amin’ny faha-84 taonany, ny amiraly Ratsiraka Didier. Tontosa omaly sady natao niezinezina tokoa ny fandevenana an’ity Filohampirenena teo aloha ity. Natao ho andro fisaonam-pirenena noho ny fahalasanany rahateo ny andron’ny 29 marsa, hany ka toy ny niendrika marika hafa kely ny fametrahana ny nofo mangatsiakany teny amin’ny Fasan’ny maherifo, tetsy Avaratr’ Ambohitsaina.
Ankoatra ireo lehibena andrimpanjakana, notarihin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry sy ireo fianakaviam-ben’ny Foloalindahy, dia isan’ireo nanotrona ny fotoana nanaovana veloma azy farany teny amin’ ny lapan’ Iavoloha ireo masoivoho sy solontenan’ny sampandraharaha iraisampirenena eto amintsika. Nitandahatra nikopa-tanana azy farany teny amin’ireo kihon-dalana nandalovan’ny kôrtezy nitondra ny razana ireo sokajin’olona samihafa.
29 marsa: fisaonam-pirenena
Tao anatin’ny filaminana sy firindrana tanteraka, akaikin’ny tsy nisy tomika, ny fikarakarana ny hetsika rehetra tamin’izao fara veloma natao tamin’ny amiraly izao, nanomboka teny amin’ ny Chapelle millitaire, tetsy amin’ny hopitaly Soavinandriana, nandalo teny Faravohitra nisy ny treno fonenany ary nihazo an’ Iavoloha ka hatreny amin’ny Fasan’ireo maherifo teny amin’ny Mausolée, Avaratr’ Ambohitsaina.
Ho voarakitry ny tantara hatramin’ny andro nandevenana azy satria nifanandrify indrindra tamin’ny fitsingerenan’ ny fanamarihana ny faha-74 taonan’ny tolom-panafahana tamin’ny 29 marsa 1947. Nofoanana rahateo ny fanamarihana tamin’ny fomba ofisialy an’io daty io satria nodidian’ny Fanjakana ho andro fisaonam-pirenena omaly tontolo, noho ny fahalavoan’ity andrarezin’ ny firenena sy ny politika teto Madagasikara ity.
Faha-13 amin’ireo Malagasy voasokajy ho maherifo, ka milevina etsy amin’ny Mausolée ny amiraly Ratsiraka Didier, miaraka amindry Ralaimongo Jean sy ireo manam-boninahitra, toa andry Rakotomalala Joel… « Maherifon’ny firenena izy sady manana ny mari-boninahitra ambony indrindra, kintana dimy », hoy ny fanamarihan’ny Filohan’ ny Repoblika, Rajoelina Andry.
Toerana manokana voaravaka loko mena misy ny sarin’ny amiraly tamin’ny velarana lehibe no nametrahana ny vata-mangatsiakany teny amin’ny lapan’Iavoloha, izay naoriny. Nandravaka ny fanaovam-beloma azy farany, ankoatra ny fotoam-pivavahana, ny fanomezan-danja ny zavabitany teo amin’ny fitantanana an’i Madagasikara ary nohamafisin’ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo akaiky azy, tamin’ny alalan’ny zandriny, Ratsiraka Elysé sy ny Pr Andrianarisoa Ange, mpiara-dia tsy niala taminy mihitsy tao anatin’ny antoko Arema.
Tetsy amin’ny Chapelle militaire-n’ny CENHSOA no niandrasana ny razana, nanomboka ny tolakandron’ny sabotsy 28 marsa 2021, sy nifandimbiasan’ny fianakavian’ny amiraly Ratsiraka Didier nandraisana an’ireo mpamangy amin’ny fahoriana tahaka izao. Tsy tazana tamin’ireo fotoana ireo mihitsy kosa ny vadiny, Ratsiraka Céline, noho ny toe-pahasalamany mbola tena marefo.
Nilaza ho saika tsy nino ny fahalasanan’ny amiraly ny Filoha Rajoelina Andry satria nampahafantarany fa « mbola nifampiantso tamin’ny amiraly izy, ny alin’ny zoma tamin’ny 10 ora latsaka fahefany. Noresahiny tamin’izany ny hoe inona avy no fotodrafitrasa tokony hapetraka eto Madagasikara? Teo koa ny valanaretina Covid-19. Ireo no hafany tamiko ».
Tsiahivina fa naiditra hopitaly niaraka tamin’ny vadiny teny amin’ny CENSHOA Ratsiraka Didier sy ny vadiny, tamin’ny alatsinainy 21 marsa 2021 noho ny gripa sy fisian’ny fambaran’aretina niendrikendrika Covid-19. « Narahi-maso ny toe-pahasalaman’izy ireo na dia niiba aza ny fitiliana natao », hoy ny nambaran’ ny zanany vavy, Ratsiraka Sophie, tamin’ny talata 23 marsa 2021. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ireo tompon’andraikitra teo anivon’ny hopitaly miaramila eny Soavinandriana dia olana tao amin’ny taovampisefoana no nitarika ny fahafatesan’ny Filoha teo aloha. Tsy nisy nanamarina an’izany kosa ireo olona akaiky azy, satria « olan’ny fo » aza no nolazaindRatsiraka Roland, zanadrahalahiny, fa nahatonga an’izao fodiamandrin’ny amiraly izao.
L’article Fahafatesana filoha teo aloha :: Niezinezina ny fandevenana ny amiraly Ratsiraka Didier est apparu en premier sur AoRaha.
Tanora dimy mianadahy, 19 sy 20 taona, handeha handray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena “Robotic Challenge”, hatao any Inde ny 14 hatramin’ny 16 desambra ho avy izao. Manohana tanora mikirakira ny siansa sy ny teknolojia ny Airtel Madagascar, ho fanatevenana ny fahaizan’izy ireo. Efa nisy tamin’ireo ny nandray anjara tamin’ny fifaninanana “App Challenge” natao tany Singapour sy ny “First Global Challenge” tany Washington DC sy tany Mexico. Niavaka hatrany ny zava-bitan’ny tanora malagasy, tsara toerana tamin’ireo fifaninanana ireo, ka izao mbola vonona ny hanohana azy ireo izao indray ny Airtel. Manomana ny fifaninanana « Techfest » ny Indian Institute of Technology any Mumbai, lehibe indrindra mahakasika ny siansa sy ny teknolojia vaovao any Azia amin’izao taonjato diavintsika izao. « …Raha fahaizana noforonina ny fisokafana lehibe ho an’ny fampandrosoana amin’ny ankapobeny, manampy betsaka izany ho an’ny tany an-dalam-pandrosoana hamahana ireo olana isan-karazany, ohatra, ny amin’ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny tontolo iainana sy ny maro hafa mahasoa ny zanak’olombelona ka mahatonga anay manohana ireto ekipa tanora malagasy ireto », hoy ny tale jeneralin’ny Airtel, i Maixent Bekangba, omaly, tao amin’ny foiben’ny Airtel, raha nampahafantatra ireo tanora ireo. Razafiarison Irina sy Rasoamanana Diamondra, efa nandray anjara tany Washington DC ; Randriarimanana Tsiresy Milà, efa tany Mexico. « Natao ho an’ny rehetra ny siansa, toy ny robot, ary mampisokatra anay hahita lalan-kafa izao fandraisanay anjara izao», hoy Rakotoarimanana Miantra sy ilay tovovavy tokana, Ramanantsoa Christelle, avy ao amin’ny Cnam*. Tsy misy fandraisana anjaran’ny fanjakana ny amin’ny fanampiana ireo tanora ho any Inde ireo, milaza ho tsy manana tetibola ho amin’izany. Nefa mora mahita tetibola ireo olom-panjakana ambony sy ny mpiara-dia aminy rehefa mivoaka any ivelany. R.MathieuL’article Inde: tohanan’ny Airtel ny fifaninanana « Techfest » a été récupéré chez Newsmada.
Zo mahafantatra ny rahaharam-panjakana: tontosa ary nampahafantarina ilay volavolan-drijan-tenin-dalàna
Hanala ny elanelana misy eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka… Ampahany fotsiny io, amin’ny maha zava-dehibe ny zo mahafantatra ny raharaham-panjakana. Nampahafantarina ampahibemaso, omaly, ilay volavolan-drijan-tenin-dalàna momba ny fahazoa-mamantatra ny raharaham-panjakana, tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Tetikasa efa nokotrehin’ny Comité pour la sauvegarde de l’intégrité (CSI) izany ny taona 2006. Nihantona teny anefa, noho ny antony maro… « Vokatry ny tolo-kevitra nangonina avy amin’ny mpisehatra rehetra voakasika, taorian’ny volavolan-kevitra voalohany, izy ity. Nakana hevitra avokoa ny solontenan’ireo andrimpanjakana, ireo minisitera isan-tsokajiny, ny fiarahamonim-pirenena, sns », hoy ny nambaran-dRakotondrasoa Fetra, tale jeneraly mpisolo toerana, misahana ny serasera eo anivon’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera. « Notontosaina teto amin’ity efitrano Dox ity, ny 26 septambra lasa teo, ny fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zo mahafantatra ny raharaham-panjakana. Nambarako teto tamin’izany fa nandray fanekena ny minisitera hiroso amin’ny famolavolana ny lalàna momba ny zo mahafantatra ny raharaham-panjakana. Teny nomena ary hanaovana fanamby ny fahavitany, sy ny hahatafavoaka azy hatramin’ny farany, tahaka ny natao tamin’ny lalàna mifehy ny haino aman-jery. Kolontsaina ny fanajana ny teny nomena, ary zava-dehibe loatra ho anay eto anivon’ity minisitera ity izany. Tsy lalàna fe lalàna fotsiny fa fanovana toe-tsaina, fomba fanao ary fomba fiasa izany. Fambolena kolontsaina manome tamberin’andraikitra”, hoy ny nambaran’i Lalatiana Andriantongarivo, minisitry ny Kolontsaina sy ny serasera. Mbola handalo dingana maro ity volavolan-drijan-tenin-dalàna ity…Zo ny Aina L’article Zo mahafantatra ny rahaharam-panjakana: tontosa ary nampahafantarina ilay volavolan-drijan-tenin-dalàna a été récupéré chez Newsmada.
Fahafatesana mampiahiahy :: Lehilahy hita faty tao amina trano iray teny Ambanidia
Nahitana razana lehilahy, 37 taona, tao amin’ny trano iray teny Faliarivo-Ambanidia, afak’omaly hariva. Nintsilany teo ambony fandriana hazo ny vatana mangatsiakany. Nijery ny zava-nisy ny polisy eny amin’ny Boriborintany faharoa niaraka tamin’ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH). Voantso eny amin’ny sampana misahana ny heloka bevavan’ny Polisim-pirenena (BC) eny Ampefiloha, ny tompon’andraikitry ny fokontany Faliarivo Ambanidia sy ny tompon’ny trano nisehoan’ny voina. “Tao ambany rihan’ny trano iray misy rihana dimy voalaza fa tsy tena fandriambahiny teny Faliarivo Ambanidia no nahitana ny razana tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany. Tao anatin’ny sakaosy teo akaikiny no nisian’ny taratasy milaza ny mombamomba ny maty. Tsy nisy ratra tamin’ny vatany. Araka ny fahitan’ny mpitsabo ny razana dia ahiana ho namono tena izy”, hoy ny loharanombaovao avy amin’ny mpitandro filaminana. Taratasy maha mpitandro filaminana Nalain’ny BMH naterina eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) itsy razana itsy taorian’izay. “Hatao fitsirihana ny razana mialoha ny handevenana azy mba hahafantarana ny mety ho antony nahafaty azy. Izay no antony nanaterana ny razana eny amin’ny HJRA”, hoy ny loharanom-baovao. Manao famotorana momba an’io tranga io ny Polisy sakelika voalohany ao amin’ ny BC. Misy ny angom-baovao milaza fa nahitana taratasy maha mpitandrofilaminana tao anaty sakao-sin’itsy lehilahy hita faty itsy. Eo am-pikarohana ny fahadisoana na ny fahamarinan’izany ny tompon’ andrai-kitry ny Polisy, ny Zandary ary ny Tafika L’article Fahafatesana mampiahiahy :: Lehilahy hita faty tao amina trano iray teny Ambanidia est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra Eoropeanina: miisa 51 ireo lalao amin’ny Euro, amin’ny kianja 11
J-16 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Euro 2021”, andiany faha-16 amin’ny taranja baolina kitra anio. Fihaonana hotanterahina amin’ireo kianja 11 manerana an’i Eoropa, manomboka ny 11 jona ka hatramin’ny 11 jolay ho avy izao dia Londres, Munich, Bakou, Copenhague, Glasgow, Séville, Budapest, Roma, Amsterdam, Bucarest sy Saint-Petersbourg. Hiady lohany amin’izany ireo ekipa 24, tafita amin’ity dingana famaranana ity. Mitotaly 51 ireo lalao rehetra iainana mandritra ny iray volana. Andrasan’ny rehetra ny fihaonana ao amin’ny sokajy “F”, misy an’i Frantsa, Portiogaly ary i Alemaina. Indro ary ny fandaharam-potoana rehetra amin’ity “Euro 2021”, ity. Fizaran-tsokajy Sokajy «A» – Kianja Rome sy Bakou : Torkia, Italia, Pays de Galles, Soisa Sokajy «B» – Kianja Copenhague sy Saint-Pétersbourg : Danemark, Finlande, Belzika, RosiaSokajy «C» – Kianja Amsterdam sy Bucarest : Pays-Bas , Okraina , Aotrisy , Macedoine avaratra Sokajy «D» – Kianja Londres sy Glasgow : Angletera , Kroasia , Ékosy , Tsekoslovakia Sokajy «E» – Kianja Séville sy Saint-Pétersbourg : Espaina , Soeda , Polonina , Slovakia Sokajy «F» – Kianja Munich sy Budapest : Hongria , Portiogal , Frantsa , Alemaina Fifanintsanana isam-bondrona : (Ora malagasy) Zoma 11 jonaSokajy «A» – Kianja Roma08 : 00 – Torkia # Italia Asabotsy 12 jonaSokajy «A» – Kianja Bakou02:00 – Pays de Galles # Soisa Sokajy «B» – Kianja Copenhague05 :00 – Danemark # Finlande Sokajy «B» – Kianja St-Petersbourg08 :00 – Belzika # RosiaSokajy «D» – Kianja Londres02 :00 – Angletera # Kroasia Sokajy «C» – Kianja Bucarest07:00 – Aotrisy # Macedoine avaratra Sokajy «C» – Kianja Amsterdam08 :00 – Pays-Bas # OkrainaAlatsinainy 14 jonaSokajy «D» – Kianja Glasgow02 :00 – Ekosy # Tsekoslovakia Sokajy «E» – Kianja St-Petersbourg07 :00 – Polonina # Slovakia Sokajy «E» – Kianja Séville08 :00 – Espaina # Soeda Talata 15 jonaSokajy «F» – Kianja Budapes07:00 – Hongria # Portiogal Sokajy «F» – Kianja Munich08 :00 – Frantsa # Alemaina Alarobia 16 jonaSokajy «B» – Kianja St-Petersbourg02:00 – Finlande # Rosia Sokajy «A» – Kianja Bakou07 :00 – Torkia # Pays de Galles Sokajy «A» – Kianja Roma08 :00 – Italia # SoisaSokajy «C» – Kianja Bucarest02 :00 – Okraina # Macédoine avaratra Sokajy «B» – Kianja Copenhague05 :00 – Danemark # Belzika Sokajy «C» – Kianja Amsterdam08:00 – Pays-Bas # Aotrisy Zoma 18 jonaSokajy «E» – Kianja St-Petersbourg02 :00 – Soeda # Slovakia Sokajy “D” – Kianja Glasgow05 : 00 – Kroasia # Tsekoslovakia Sokajy «D» – Kianja Londres08:00 – Angletera # EkosySokajy «F» – Kianja Budapest02:00 – Hongria # Frantsa Sokajy «F» – Kianja Munich05 :00 – Portiogal # Alemaina Sokajy «E» – Kianja Séville08 :00 – Kianja Séville08 :00 – Espaina # Polonina Alahady 20 jonaSokajy «A» – Kianja Roma05 :00 – Italia # Pays de Galles Sokajy «A» – Kianja Bakou05 :00 – Soisa # TorkiaSokajy «C» – Kianja Amsterdam05 :00 – Macédoine avaratra # Pays-BasSokajy «C» – Kianja Bucarest05 :00 – Okraina # Aotrisy Sokajy «B» – Kianja Copenhague08 :00 – Rosia # Danemark Sokajy «B» – Kianja St-Petersbourg08:00 – Finlande # BelzikaTalata 22 jonaSokajy «D» – Kianja Londres08 :00 – Tsekoslovakia # Angletera Sokajy «D» – Kianja Glasgow08:00 – Kroasia # EkosyAlarobia 23 jonaSokajy «E» – Kianja Séville05:00 – Slovakia # Espaina Sokajy «E» – Kianja St-Petersbourg05 :00 – Soeda # Polonina Sokajy «F» – Kianja Munich08 :00 – Alemaina # Hongria Sokajy «F» – Kianja Budapes08 :00 – Portiogal # Frantsa Ampahavalon-dalana Sabotsy 26 jonaKianja Amsterdam05 :00 – 2 è “A” # 2 è “B”Kianja Londres08:00 – 1è “A” # 2è “C” Alahady 27 jonaKianja Budapest05 :00 – 1è «C» # 3è D/E/FKianja Séville08:00 – 1è “B” # 3è A/D/E/FAlatsinainy 28 jonaKianja Copenhague05 :00 – 2è «D» # 2è «E»Kianja Bucarest08:00 – 1è “F” # 3è A/B/CTalata 29 jonaKianja Londres05 :00- 1è «D» # 2è «F»Kianja Glasgow08 :00 – 1è «E» # 3è A/B/C/D Ampahefa-dalana Zoma 2 jolayKianja St-Petersbourg05:00 – Ampahefa-dalana (1)Kianja Munich08:00 – Ampahefa-dalana (2)Sabotsy 3 jolayKianja Bakou05:00 – Ampahefa-dalana (3)Kianja Roma08:00 – Ampahefa-dalana (4) Manasa-dalana Talata 6 jolayKianja Londres08: 00 – Manasa-dalana (1)Alarobia 7 jolayKianja Londres08:00 – Manasa-dalana (2) Famaranana Alahady 11 jolayKianja Londres08: 00 – Famaranana L’article Kitra Eoropeanina: miisa 51 ireo lalao amin’ny Euro, amin’ny kianja 11 a été récupéré chez Newsmada.
Lozam-pifamoivoizana :: Zatovo roa, lahy sy vavy, namoy ny ainy tamin’ny môtô
Niharan’ny lozam-pifamoivoizana ireto tovolahy sy tovovavy, mpinamana, samy manodidina ny roapolo taona, nanao taingin-droa tamina môtô rehefa nifandona tamin’ny kamiao tany amin’ny lalam-pirenena fahadimy, akaikin’Ivoloina Toamasina, afak’omaly tolakandro. Maty tsy tra-drano ilay tovovavy nitondra ny môtô. Tsy tana kosa ny ain’ilay tovolahy, nony tonga tany amin’ny hopitaly. Nitodi-doha nikasa hody any Toamasina ireto tanora ireto no tra-doza. Nanao ny fizahana ny zava-niseho ny zandary avy amin’ny Borigady misahana ny lalam-pirenena (BPR). “Tsy nisy nahita ny fisehon’ny loza fa ny fitantaran’ireo mpamily teny an-toerana no naminavinana ny zavaniseho. Nanaraka ny vodin’ny fiara iray ilay môtô. Nivoaka tampoka izy kanjo nifandona tamina kamiao nifanena taminy. Nanao aro loha ireo mpandeha môtô saingy mafimafy ny fifandonana ka niteraka ratra izay niafara tamin’ny fahafatesana. Nanatona zandary nampandre ny loza niseho ny mpamilin’ilay kamiao”, hoy ny zandary ao amin’ny BPR Toamasina. Nandalo teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza, tokony ho ora iray taty aoriana, ny andiana tanora hafa nitondra môtô naman’ireto niharamboina. Teo vao fantatra ny mombamomba an’iretsy farany. Natolotra ny fianakaviana ny razana. L’article Lozam-pifamoivoizana :: Zatovo roa, lahy sy vavy, namoy ny ainy tamin’ny môtô est apparu en premier sur AoRaha.
Andro faharoa ho an’ny hetsika fanampiana ireo traboina no notontosaina omaly faha-21 martsa 2017 teny amin’ny foiben’ny ACM. Nisy komity natsangana mihitsy hisahana ny fanangonana ireo tolo-tanana ho an’ireo lasibatry ny rivo-doza mahery ENAWO farany teo. Tsy ny orinasa Malagasy ihany no nanolotra izay voatsirambin’ny tanana ho azy ireo fa nandray anjara ihany koa ireo orinasam-pitaterana an’habakabaka vahiny toy i Air Austral sy Corsair tamin’ity andiany manaraka ity. “Karazan’entana toy ny sakafo, botofotsy, fitafiana, kojakoja maro samihafa mitentim-bidy eo 180 tapitrisa ny fitambaran’ny tolo-tanana voaangona”, hoy ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny fitaterana, Rado RAJEOLISON. Omaly ihany dia efa nitondra izay zakany ny teo anivon’ny BNGRC ary tonga dia ho entina any amin’ny toerana hitsinjarana azy. Isaky mandray fanampiana tahaka izao ity sampandraharaha ity, manolotra mari-pankasitrahana ireo manao izany. Ankoatra izany, mbola ho avy ny fanampiana manaraka satria efa nampanantena ireo oriansa vahiny hafa. Nirina R. Cet article BNGRC-ACM: Samy nitondra fanampiana ireo orinasam-pitaterana an’habakabaka Malagasy sy vahiny. est apparu en premier sur déliremadagascar.
Ambohijanaka : mpianadahy indray maty tao an-dava-biriky
Zaza mpianadahy no hita faty tao anaty lava-biriky iray feno rano tetsy Mananjara, Kaominina Ambohijanaka, afakomaly tolak’andro. Handeha hianatra hira tany am-piangonana no nivohan’ilay zazavavikely ny trano kinanjo nifampitarika tamin’ilay anadahiny ny tenany. Namonjy ny toerana fanaovam-birika izay feno rano noho izany izy mianadahy ka nilomano. Vokany, maty tao anatin’ilay lavaka feno rano izy ireo. Efa navoakan’ireo ankizy manodidina ny rano ilay zazalahikely, saingy tsy nisy aina intsony. Mbola taraiky tao anefa ilay tovovavikely ka tonga nanavotra azy ny fianakaviany, saingy efa vatana mangatsiaka no hany sisa azo.Tsiferana Randriatiana L’article Ambohijanaka : mpianadahy indray maty tao an-dava-biriky a été récupéré chez Newsmada.
Lomano – Ligin’Analamanga: hanomboka ny 14 novambra ny taom-pilalaovana
Taorian’ny fihibohana nandritra ny roa toana, hisokatra manoboka ny 14 novambra ho avy izao indray ny taom-pilalaovana ho an’ny ligy Analamanga manokana. Manoloana izany indrindra, maro ny hetsika hotontosain’ny eo anivon’io ligy io, entina hampivelarana ity taranja ity. Anisan’izany ny kilalao maro atao anaty rano. “Tsy voatery ho fifaninanana irery ihany, fa hiezaka ny hanitatra any anatin’ny activité aquatique izahay”, hoy ny filohan’ny ligy Analamanga, Rasoanjanahary Valisoaniaina. Heverina fa hampiavaka manokana ny ligin’Analamanga ny fanatanterahana io hetsika io. Tontosa tetsy amin’ny ANS Ampefiloha, ny asabotsy lasa teo moa ny fivoriambe, nanehoana tamin’ny fomba ofisialy ireo mpikambana ao anatin’ny ligy Analamanga. Miisa valo mianadahy izy ireo ary efa neken’ny eo anivon’ny minisitera sy ny solontenan’ny klioba.Tsiferana R.L’article Lomano – Ligin’Analamanga: hanomboka ny 14 novambra ny taom-pilalaovana a été récupéré chez Newsmada.